सिल्भिया- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १४, २०७६ रोशन शेरचन
स्मृति बन्ने र सम्झने कुरामा मानिस गाईभैंसीभन्दा सायद भिन्न छैन  । अवसर पाउँदा गाईभैंसी अधिक घाँस निल्छन् र फुर्सदमा उग्राउँदै चपाई चपाई स्वाद लिन्छन्  ।
मानौं, खानपान बल्ल सुरु भएको छ । स्मृति बन्ने र सम्झने कुरामा मान्छे पनि ‘रुमिनेन्ट’ जस्तै छ । मौका पाउँदा स्मृतिहरूका धेरै घान हाल्छन् । फुर्सदमा मात्र चाल पाउँछन्, के कस्ता स्मृतिहरू निर्माण भएका रहेछन् भन्ने ।
सिल्भिया लेख्न बस्दा यस्तैखाले अनुभव भयो । घोत्लदै जाँदा सिल्भिया प्लाथसँग जोडिएको एउटा सिनेमा, केही थान कविता र एडिबराको संस्मरण रहेछ । उक्त विषय स्मृतिपटमा सजिलो गरी आएन । घटनाक्रम पुरानो भएकाले पनि होला, सोचाइमा बल पर्‍यो । एडिनबरा सहरमा अध्ययनबाहेक मैले गरेको अर्को नियमित कर्म थियो— सिनेमा हेर्नु । लोदियन रोडमा एडिनबराकै पुरानो सिनेमा हल छ— फिल्महाउस । मंगलबार विद्यार्थीको निम्ति टिकट मूल्यमा भारी छुट भएकाले नियमित सिनेमा हेर्नु मेरो प्राथमिकतामा पर्‍यो । अन्य दिन पाँच–छ पाउन्ड पर्ने टिकट त्यो दिन साढे दुई पाउन्ड हुन्थ्यो । सिनेमाले मेरो अध्ययनले निर्माण गरेको एकरसको जीवनलाई केही हदसम्म मुक्त गर्‍यो ।
हस्टेलछेउ बसस्टप थियो । पच्चीस–तीस मिनेटमै बसले फिल्महाउस पुर्‍याउँथ्यो । फिल्महल अत्याधुनिक बान्कीको थिएन बरु सांस्कृतिक शैलीको देखिन्थ्यो । ब्रोसर पनि बाँडिन्थ्यो । सिनेमा हेरेर फर्कंदा ब्रोसर बोकेर आउँथें । ब्रोसरमा त्यस महिना देखाइने सिनेमाको सूची र सारहरू सर्सती हुन्थे । मनपरेको सिनेमामा गोलो चिह्न लगायो । तोकिएको दिन बस चढेर फेरि फिल्महाउस गयो । त्यसरी दर्जनौं सिमेना हेरें । मानौं फिल्महाउस एडिनबरामा मैले पत्ता लगाएको अथाह खुसीको खानी थियो, जुन प्राप्त गर्न मैले धेरै खर्चन पर्दैनथ्यो । घोत्लेपछि थाहा भयो, त्यो पाटो कतै छुटेको रहेछ ।
त्यहाँ हेरेको एउटा सिनेमा थियो— ‘सिल्भिया’ । त्यो सिनेमा अमेरिकन कवि सिल्भिया प्लाथको जीवनकथा, कवितायात्रा, संघर्ष, प्रेम, प्रेरणा, वैवाहिक जीवन, मानसिक विचलन र आत्महत्याका शृंखलाको अनेकन पत्रहरूमा बेरिएर आएको थियो । उनको दुर्दान्त पीडा, कवि बन्ने सघन महत्त्वाकांक्षा, टेड ह्युससँगको असफल वैवाहिक जीवन र आत्महत्याको दृश्यले गहिरो स्पर्श गरेको थियो । सिल्भिया प्लाथको नाम नयाँ त थिएन । त्यति विस्तृतमा भने सिनेमा हेरेपछि थाहा भयो । सिनेमा हेरेको केही दिनसम्म सिनेमाले मलाई उदास बनायो । गम्भीर खालको कविता सृजना असाध्य एक्लो कर्म रहेछ भन्ने पनि बोध भयो ।
सिल्भिया अमेरिकी फुलब्राइट छात्रवृत्तिमा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा पढ्न आउँछिन् । उनको टेड ह्युससँगको पहिलो भेट युनिभर्सिटीको एक पार्टीमा हुन्छ । टेड ह्युस त्यतिबेला चर्चित कवि भैसकेका हुन्छन् । सिल्भिया ह्युसका कविताबाट प्रभावित हुन्छिन् । त्यसो त उनी कवि डायलन थोमसको कविताबाट झन् बढी प्रभावित हुन्छिन् तर उनी थोमसलाई भेट्न पाउँदिनन् । पार्टीमा दुई जनाको पहिलो भेटको दृश्याङ्कन मनमोहक छ । टेड पार्टीको भीडभाडभन्दा पर कुनामा एक्लै उम्भिरहेको हुन्छ । नाचिरहेको भीड छिचोल्दै सिल्भिया कुनातिर हानिन्छिन् । ह्युसको सम्मोहन, धेरै अर्थमा सिल्भियाको दुःखद यात्राको आरम्भ विन्दु बन्छ ।
एकअर्काप्रतिको आकर्षण प्रेम हुँदै विवाहमा परिणत हुन्छ । दुई सन्तान भइसकेपछि घरायसी व्यस्तताले सृजना टाढिंदै गएकाले सिल्भियामा गहिरो निराशा छाउँछ । सिल्भिया सानै उमेरदेखि तीक्ष्ण बुद्वि भएकी प्रतिभाशाली व्यक्ति थिइन् । टेडको जीवनमा अर्को महिला आएपछि त सिल्भियाको निराशा अवसादमै पुग्छ । उनको लेखक बन्ने महत्त्वाकांक्षा, तीव्र संवेदनशीलता र बिग्रँदो वैवाहिक सम्बन्धले उनलाई आत्महत्यातिर उन्मुख गराउँछ । धेरै पटकको प्रयासपछि सिल्भियाले ११ फेब्रुअरी, १९६३ मा आफ्नो ज्यान लिन्छिन् । त्यसबखत उनको उमेर मात्र ३० वर्षको हुन्छ ।
सिल्भियाको मृत शरीरलाई कफिनमा शववाहनसम्म राख्दाको दृश्य बिथोल्ने खालको छ । कलात्मक शैलीको त्यो सिनेमेटोग्राफीले उच्चकोटिको प्रभाव उत्पन्न गर्छ । माथिबाट खिचिएको छ– एरियल सट । दुई जनाले सडकमा कफिन निकाल्छन् । कफिन रातो कपडाले ढाकिएको छ । त्यसबाहेक सडक, घर र नजिक रोकिएको गाडी सम्पूर्ण सेतो छ । छेउको गाडी हिउँले पुरिएको छ । अर्को छेउको शवबाहनको पछिल्लो भागमात्र देखिन्छ । त्यसको ढोका खोलिएपछि शववाहनमा कफिन राखिन्छ । बिस्तारै हिउँमा टायरका डोबहरू बन्दै गुडिरहेको शववाहन फ्रेमबाट बाहिरिन्छ । पार्श्वसंगीतले प्रभावलाई झनै सघन बनाउँछ ।
सिनेमा, सिल्भियाको उदास कविताजस्तै छ । यसको टोन कालो छ । निस्सासिँदो मौन फ्रेम छ । दृश्यांकन जति आउटडोरको छ, उत्तिकै इनडोरको पनि छ– कविमानसको । नैराश्य, आक्रोश र गुम्फनले लछप्पै भिजेको । सिनेमा सक्किएपछि हिँडेरै होस्टल फर्किएँ । सिमसिम पानी परिरहेको थियो । एडिनबरा सहर मानौं भर्खर नुहाएर बाथरुमबाट निस्किएको छ । पर्याप्त मादक । टुलिप फूलको रङहरूमा खुलेको एडिनबरा कल्पना कोष्ठमा ‘इम्प्रेसनिस्ट पेन्टिङ’ झै देखिन्छ । यो सहरमा भद्दा गगनचुम्बी भवनहरू छैनन् । प्रमुख रूपमा भिक्टोरियन ढाँचाको वास्तुकला भएको यसलाई उत्तरको एथेन्स पनि भनिन्छ । युनेस्कोले वैभवशाली संस्कृति र साहित्यको इतिहासलाई आधार मानी सन् २००४ मा एडिनबरालाई ‘सिटी अफ लिटरेचर’ नै घोषणा गर्‍यो । जे. के रोलिङको ‘ह्यारी पोर्टर’ को प्रसिद्विले पनि यो सहरको गरिमा चुलिएको थियो । रोबर्ट बन्स, रोबर्ट लुइस स्टिभेन्सन, अर्थर कोनन डोयल, वाल्टर स्कटहरू आदि त विश्वप्रसिद्ध धरोहर नै भए ।
‘सिल्भिया’ ले उत्पन्न गरेको प्रभावले मन र मस्तिष्क बेस्सरी बिथोलिएको थियो । माध्यम सिनेमा भएकाले प्रभावहरू अनुभव हुने मात्र होइन, देखिने पनि रहेछ । पुस्तकको प्रभाव भएको भए, सायद प्रभावहरू देखिँदैनथ्यो । विचारस्वरूपमा मात्र आउँथ्यो । चेतन वा अवचेतन तहमा विविध प्रभावहरूको जम्काभेट हुन्छन् । जुन प्रभावसँग संवेदना जोडिन्छन् ती स्मृतिमा तैरिन्छन् । बाँकी विस्मृतिको गर्तमा विलुप्त हुन्छन् । जति प्रबल संवेदना कुनै घटनाले हामीभित्र उत्पन्न गर्छ, त्यो स्मृति त्यति नै गहिरो गरी बस्छ । जतिसुकै पुरानो किन नहोस्, संवेदनाले त्यस्ता स्मृतिलाई मरिकाटे विलुप्त हुन दिँदैन । केही दिनसम्म सिनेमाले मलाई अर्को लोकमा पुर्‍यायो जबसम्म अध्ययनको चाप बढ्दै गएर त्यसका प्रभावहरू मस्तिष्कको पृष्ठभूमितिर धकेलिएनन् ।
सिल्भियाले भोग्नुपरेको ट्र्याजडीका केही साझा कारणहरू हाम्रै समाजमा पनि सायद खोज्न सकिन्छ । सानै उमेरमा उनको बुबाको निधनले ल्याएको नियास्रोपन त छ नै त्यसभन्दा बढी पुरुषको वर्चस्व रहेको क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाउन महिलाले गरेको अथाह संघर्षको कथा पनि छ । घरायसी र बच्चाहरूको लालनपालनको कामले लगाउने तगारा पनि पर्याप्त देखिन्छ । बाटैभरि महिला भएकै कारणले झेल्नुपरेको अवरोधको दृश्यकथा पनि हो— ‘सिल्भिया’ । उनको कवितासंग्रह ‘एरियल’ र अटोबायग्राफिकल उपन्यास ‘बेल जार’ कालजयी मानिन्छन् । यही सृजनाको बलमा उनी पाठकमाझ अझैसम्म बाँचिरहेकी छन् ।
सिल्भिया प्लाथका दुःख, पीडा र संघर्षलाई नेपाली महिला लेखकहरू बाँचिरहेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचनासँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलन, पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको फेमिनिज्मको उभार, लिङ्गीय विभेदविरुद्वको आन्दोलन, मिटू अभियान, कलाका प्रयोग र साहित्यिक फेस्टिभलका बहसहरूले देशभित्र र बाहिरका सिल्भियाहरूको जीवनलाई नयाँ आलोकमा हेर्न आग्रह गरेका छन् । उत्तिकै उत्सुकताको विषय पनि बनाइदिएको छ ।
नेपाली महिला लेखकहरूले भोग्दै र लेख्दै आएका समस्या र सवालहरू नितान्त भिन्न छैनन्, समान प्रकृतिका पनि छन् । जब महिलाले पुरुषको अंग मात्र भएर बाँच्न अस्वीकार गर्छन् र आफूभित्रको पृथक् व्यक्तित्वलाई जन्माउन थाल्छन्, तिनको जम्काभेट शताब्दीयौं पुरानो पित्रसत्तात्मक संरचनासँग हुन्छ नै । सिल्भिया ह्युसको छाया मात्र भएर बाँच्न चाहँदिनन् । ऊ आफूभित्रको कविव्यक्तिलाई अग्लाइमा पुर्‍याउन चाहन्छिन् । अवस्थाहरू प्रतिकूल बन्छन् र उनी अवसादको खाडलमा पुरिन्छिन् ।
सिनेमा हेर्दा अनुभव हुन्छ, टेड ह्युस तत्कालीन समाजको पितृसत्तात्मक संरचनाको एउटा प्रतिनिधि हुन् । लैङ्गिक विभेद र महिला हिंसा नेपाली समाजमा मात्र सीमित छैन । पश्चिमी देशमा पनि यसका क्रूर पञ्जाहरू यथेष्ठ गाडिएको देख्न सकिन्छ । सिल्भियाको गर्भको बच्चा तुहिनु केही दिनअघि टेडले उनलाई कुटेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि, केही महिलावादी लेखकहरूले ह्युसलाई हत्यारा पनि भने । चर्चित कवि ह्युस किन त्यति कठोर बने ? जवाफहरू सजिलै भेटिँदैनन् । केही समीक्षकहरू त ह्युसप्रति सहानुभूति प्रकट गर्छन् । समीक्षक जोनाथन बेट्स ह्युसभन्दा सिल्भियाको मानसिक विचलनलाई आत्महत्याको प्रमुख कारण मान्छन् । सिनेमा हेर्दै गर्दा, सिल्भियाको जीवन त्यस्तो जीवन अनुभूत हुन्छ, जहाँ एक अत्यन्त प्रतिभाशाली लेखक आफू बाँचेको समाज र कविमानससँग जुध्दै केही कालजयी सृजनाहरू छाडेर शून्यमा कतै विलुप्त हुन्छ ।
घामसँग जिस्कन्छ मेरो छाया
जब म अँध्यारोलाई सुम्सुम्याउँछु
हामी एकै हो, भिन्न पनि
जब मेरो छाया मुस्काउँछ
मलाई अवसादले उकुसमुकस पार्छ
छाया चाँडै बिलाउनेछ
एउटा खुसी, अर्को दुःख
के छ मुकारुङ, सोलुखुम्बुतिर ?
मोहन कोइरालाको सामिप्यमा
प्रयोगवादी र दुरूह कविको उपमा पाएका मोहन कोइरालालाई दुई दशकको संगतमा श्रवण मुकारुङले भने बेग्लै पाए– मान्छेको मन र व्यथा बुझ्न सक्ने !
वैशाख १४, २०७६ श्रवण मुकारुङ
विष्णुविभु घिमिरे ‘गरिमा’ पत्रिकाको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो  । हामी केही युवाकवि कवितासहित ललितपुरस्थित पत्रिकाको कार्यालय पुग्यौं  । विभु दाइसित चिया पिउँदै गफिइरहेका बेला एक युवा त्यहाँ आइपुगे । दाइले के गर्दै छौ भाइ ? पढाइ कहाँ पुर्‍यायौ ? भनेर सोध्नुभयो ।
‘मोहन कोइरालामाथि थेसिस लेख्दै छु सर !’ ती युवाले जवाफ दिए । केहीछिन् गम खाएर दाइले सोध्नुभयो, ‘सक्छौ त ?’ मुख अमिलो पार्दै उनले भने, ‘खोइ हेरूँ सर, बूढा असाध्यै चाम्रा रहेछन्, कुरा खोल्दै खोल्दैनन्, हत्तु भइसकें ।’
यति भनेर ती युवा निस्किए । तिनले साझा प्रकाशनको गेट काटेपछि विभु दाइले हामीतिर फर्केर भन्नुभो, ‘मोहन कोइरालामाथि जोकोहीले थेसिस लेख्न सक्छ ? एमए नगरी बिचरा यो निरीह प्राणीको जुनी जाने भो । लमजुङको भाइ हो, बरु माधव घिमिरेको जीवनी लेख्नु, जागिर खानु ।’ दाइका कुरा केही बुझेर, केही नबुझेर हामी वाल्ल पर्‍यौं । मैले यो प्रसङ्ग किन उल्लेख गरें भने सङ्ख्यात्मक एवं गुणात्मक दुवै हिसाबले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै हाराहारीका प्रतीभा मोहन कोइरालामाथि लेख्नु यसकारण चुनौतीपूर्ण हुन्छ, कि उहाँका रचनाहरूको बहुआयाम वा विस्तारित रूपलाई पर्गेल्न समय लाग्छ । एउटा दृढता चाहिन्छ । नत्र, एक छेउ समायो अर्को छेउ बाँकी रहन्छ ।
बाइबलमा राजा जेम्सको एउटा घतलाग्दो भनाइ छ, ‘जज नट्, द्याट वी बी नट् जज्ड् ।’ अर्थात् ‘अरूलाई परीक्षण गर्न नखोज, ताकि त्यसरी परीक्षण गर्दा तिम्रो आफ्नै परीक्षा होला ।’ त्यसैले म यहाँ मोहन कोइरालाको काव्यकारिताका बारेमा नभई केवल उहाँसित मैले संगत गरेका ती भव्य तर महँगा दिनहरूलाई सम्झिन्छु । सङ्गतबारे नेपाली समाजमा मूलतः दुईवटा लोकोक्ति प्रचलित छन् । ‘सङ्गत गुनाको फल’ र ‘ठूलाको सङ्गत गरे गुहापान, सानाको सङ्गत गरे नाककान ।’ आजको समयमा यी उक्तिहरू राजनीतिक रूपले बेठीक वा असान्दर्भिकजस्तो लागे पनि मोहन दाइसित मैले गर्न पाएको सङ्गतले भने मलाई गुहापान मिल्यो । यद्यपि यो कुरा सङ्गतकर्ताको घ्राणशक्तिमा भर पर्ने होला । नत्र त, नाथुराम गोडसेले महात्मा गान्धीको सङ्गत गरेको थियो । विश्वेश्वरको सङ्गत गर्नेहरू आज यसरी ‘हिन्दु राष्ट्र पाऊँ परमेश्वर !’ भन्दै आलापविलाप गरिहिँड्ने थिएनन् । पुष्पलालका सङ्गत गर्नेहरू आज यसरी जग्गा दलाल हुने थिएनन् ।
अमेरिकन कवि टीएस इलियटभन्दा चालीस वर्षपछि विसं १९८३ मङ्सिर ११ गते ठटुनिटी डिल्लीबजार, काठमाडौंमा माता मित्रप्रियाको कोखबाट जन्मिनुभएका आधुनिक नेपाली कविताका प्रयोगवादी धाराका प्रवर्तक कवि मोहन कोइरालासित लगभग त्यति नै वर्ष कान्छो, अझ सुदूरपूर्वी पहाडको गाउँमा जन्मिएको, उमेर अनुभव र ज्ञानले नाति पुस्ताको म बबुरोको भेट होला, यसरी सङ्गत गर्न पाइएला, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो, तर सम्भव भयो ।
म भोजपुरबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं आएको पनि आधा दर्जन वर्ष बितिसकेको थियो । यस समयमा मैले कवि हुन केही सानाठूला सभा–समारोहका अग्ला–होचा मञ्चहरूको उपयोग र भलासङ्गतहरू गर्न भ्याइसकेको थिएँ । तर खोइ के कारणले हो, पाठ्य पुस्तकमै पढेका कवि मोहन कोइरालासित भेट्ने अवसर भने जुरेको थिएन । विसं २०४८ सालको कुनै स्वर्णिम दिन मलाई यो अवसर प्राप्त भयो । त्यस दिन वाल्मीकि क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेको काव्य गोष्ठीमा कविता सुनाउन म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ । संयोगले यही गोष्ठीको प्रमुख अतिथि बनेर मञ्चको अग्रभागमा विराजमान कवि मोहन कोइरालालाई मैले पहिलोपल्ट देख्ने अवसर पाएँ । अहो ! कस्तो शालीन तर विचित्रको व्यक्तित्व ? म आश्चर्यचकित भएँ । मैले यसअघि ‘फर्सीको जरा’ कविता पढेर बनाएको त्यसको जराजस्तै जेलिएको उहाँको विम्ब एकपलमै भत्कियो । मभित्र तुरुन्तै, कुनै दर्शनशास्त्रको पुरानो पुस्तकमा अनाम चित्रकारले कोरेको सुकरातको दुब्लो अनुहारचित्रजस्तो उहाँको नयाँ विम्ब तयार भयो ।
कवितावाचन सुरु भयो । मैले महाभारतका कृष्णलाई महिलामाथि अत्याचार गर्ने आजको व्यभिचारी पुरुष (लोग्ने) को प्रतीक बनाएर लेखेको ‘मेरी आमा’ शीर्षकको कविता सुनाएँ । अरू लगभग तीन दर्जन कविहरूले पनि आ–आफ्ना रचना सुनाए । अन्तमा मोहन दाइले अत्यन्तै संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै कविता सुनाउनुभयो । अर्मूतझैं लाग्ने उहाँको उक्त मन्तव्य र कविता मैले आधा मात्र बुझेँ ।
न त मेरो जीवन कसैको घोषणापत्रको फैसला हुन सक्छ
न त मेरो जीवन राजनीतिक मस्यौदाको आधार लिएको बेहोरा हुन सक्छ
समाजवादको अन्तिम निर्णय पनि मलाई छुने अन्तिम सालिक हुन सक्दैन
न त पंँजीवादको कङ्काल नै मेरो अन्तिम संस्कार हुन सक्छ
मेरो जीवन रातो रगतसित मिसिएको चेतनाको गाढा थोप्ला हो
गोष्ठी सकियो । तर त्यहाँ भलाकुसारी गर्ने वातावरण बनेन । युवाकवि र विद्यार्थीहरूका हूलले घेरिनुभएका कविजीलाई हूलकै एक छेउबाट नमस्कार गरिराखेर म हिँडेँ । साँझ कोठा पुगेर एक्लै फेरि उहाँलाई सम्झेँ, अहो ! मेरो मस्तिष्कमा मोहन दाइको फेरि अर्को विम्ब तयार भैसकेछ । चित्रकार पाब्लो पिकासोको वन लाइन स्केचको कुनै महत्त्वाकांक्षी तर विश्वयुद्धले थाकेको प्रौढ युरोपियनजस्तो, जो आफ्नो गहिरो तर दिशाहीन सपनामा रुमलिरहेछ । मानौं, उहाँभित्रको कविलाई आफैंले ल्याएको २०४६ सालको परिवर्तन पनि अपुरो लाग्न थालेको छ । भ्रम सही, माथि उल्लिखित कविताले मलाई पारेको प्रभावको प्रतिक्रिया हुन सक्छ यो तेस्रो विम्ब । कवितामा पुँजीवाद र समाजवादभन्दा अझ परको जीवनजगत्को सङ्केत छ । छटपटी छ । हुङ्कार छ ।
पहिलो भेटको केही दिनपछि बिहान सधैंझैं क्याम्पस जाँदै थिएँ म । पुतलीसडकपछाडि न्युप्लाजाको उकालो, अहिले सर्वनाम थिएटर भएको ओरालोको खुट्किलो के ओर्लिन खोज्दै थिएँ, कविजी कतै पुगेर त्यही खुट्किलोको पुछार टेक्दै उक्लिरहनुभएको मैले माथिबाटै देखेँ । म रोकिएँ र उहँाँ नजिक आइनपुग्दै ‘नमस्कार हजुर’ भनेँ । मेरो सम्बोधनले कविजी साढे चार सिंढी तलै रोकिएर मलाई पुलुक्क हेर्नुभो । उहाँ अल्मलिनुभएको देखेर मैले फेरि नमस्कार गरेँ । बल्ल दाहिने हातको चोर औँलाले मेरो अनुहार ताक्दै सोध्नुभो, ‘अस्ति... कविता सुनाएको होइन... ?’
अप्ठ्यारो चालमा दुई खुट्किलो ओर्लिंदै मैले ‘हो हजुर’ भनेँ । त्यसपछि दुवै हात कम्मरमा राखेर उहाँले तलैबाट सोध्नुभो, ‘नाम के रे ?’ मैले आफ्नो नाम भनेँ । उहाँले नबुझेर फेरि सोध्नुभो, मैले फेरि दोहोर्‍याएँ । उहाँले ‘घर कहाँ हो ?’ भन्नुभो, मैले ‘भोजपुर’ भनेँ । के गर्छौ भनेर सोध्नुभो, मैले पढ्दै छु भनेँ । त्यसपछि उहाँ केही छिन आफैंभित्र हराएझैं हुनुभो र फेरि सोध्नुभो, ‘कतै जागिरसागिर पनि छ कि ?’ मैले विस्मय भरिएको स्वरमा ‘छैन हजुर !’ भनेँ । उहाँ फेरि अघिझैं कतै हराउनुभो ।
मैले उहाँको डुलिरहेको आँखा, मन र निस्कन खोजिरहेको शब्दलाई कुरिरहेँ । उहाँले मलाई बिस्तारै तलदेखि माथिसम्म हेर्नुभो । सायद मेरो सक्कल र पहिरनमा यो देशको लाखौँ युवाहरूको तीतो यथार्थ बेरोजगारी र सम्भावना छरपस्ट लत्पतिएको देख्नुभो कि ? फ्याट्ट बोल्नुभो, ‘जागिर पाए गर्छौ ?’ मेरो सातो उड्यो । एकाएक मुटुको चाल तीव्र भो । उहाँको मुखारविन्दबाट निस्केको यो वाक्य पहाडको कुनै कन्दरामा ठोकिएर परावर्तन भइरहेको मधुर लोकगीतझैँ मेरा कानमा गुन्जिरह्यो । म हर्ष र आश्चर्यले बोल्नै नसक्ने भएँ ।
उहाँले फेरि सोध्नुभो, ‘हँ ? गर्छौ काम ?’
भित्रभित्रै थर्थरी काँप्दै मैले उत्तर दिएँ, ‘पाए त गर्थेँ नि हजुर !’ त्यसपछि उहाँले आफ्नो दाहिने हातको साँहिली औंलाका धर्काहरू गन्दै भन्नुभो, ‘त्यसोभए भोलि... पर्सि ... निकोर्सि आइतबार दस बजे एकेडेमी आउनू !’ मैले हुन्छ हजुर भन्दै शिर झुकाएँ । कविजी उकालो लाग्नुभो । उहाँ दृृश्यबाट छेलिनुभएपछि मैले आफ्नो बाँसझैँ झुकेको शरीरलाई ठीक अवस्थामा ल्याई क्याम्पसतिर दौडिएँ ।
अहो ! त्यो सुनौलो आइतबार पर्खन मलाई युग बिताउनु बराबर भयो । बल्लतल्ल आइपुग्यो आइतबार । यसअघि कुनै अछूतले मन्दिर हेरेझैँ मैले हेर्ने गरेको एकेडेमीमा म पुगेँ । बिरालोको चालले ढोका खोल्दै म उहाँको कार्यकक्षमा प्रवेश गरँेँ र केही लेखिरहनुभएका उहाँलाई साविककै शैलीमा नमस्कार गरेँ । आधा हेरेर उहाँले मलाई च्युँडोले बस्ने सङ्केत गर्नुभो र पुनः लेख्न थाल्नुभो । म नजिकैको सोफामा टुसुक्क बसेँ । मलाई नहेरी उहाँले फेरि सोध्नुभो, ‘नाम के रे ?’ मेरो मुटु चसक्क चस्कियो, हत्तपत्त आफ्नो नाम भनेँ । तब लेख्न छोडेर मुस्कानसहित मतिर आँखा फार्दै बोल्नुभो, ‘के हो यो मुकारुङ भनेको ? शेर्पा हो ?’ मैले ‘किरात राई हो हजुर !’ भनेँ ।
उहाँले फेरि घर कहाँ हो भनेर सोध्नुभो, मैले फेरि उत्तर दिएँ । उहाँले अचानक ‘अस्ति त सोलुखुम्बु भनेका होइनौ र ?’ भन्नुभो । मैले ‘होइन सर’ भनेँ । यस्तै प्रश्नोत्तरका बीच उहाँले टेबुलको बेल थिच्नुभो र अघि लेख्नुभएको कागज अफिसका कर्मचारीलाई दिनुभो । त्यही दिन मैले उहाँको सहयोगीको रूपमा काम गर्ने अस्थायी नियुक्तिपत्र पाएँ । तब मलाई थाहा भो, उहाँ एकेडेमीको काव्य विभाग प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ । मेरो दैनिकी सुरु भो ।
कहतारो लिएर हिंड्यो भने चिन्नेहरूले उसलाई गाइने भन्छन्
सारङ्गी लिएर किन नहिंडोस् तर उसलाई माग्ने भन्छन्
गीतका पत्र कालीमाटीका पत्रजस्तै उसको छातीमा नअटाई डढेको छ
रीतका पत्र उसको हातबाट सारङ्गीजस्तै रेटिएको छ
हाम्रो कानबाट र्‍याकिएको, हाम्रो हातबाट र्‍याँकिएको
रिकार्डको टुक्रो बनेर अहिले उसको ओठ
सडकको अलकत्रामा फट्फटिरहेछ
तातो न चिसोको यो सिरेटोमा
गाइने साइँलालाई त्यसै जाडो–जाडो लागेको छ ।
२००७ सालको क्रान्तिचेतनाले बीजारोपित लोकतन्त्रका हिमायती कवि मोहन कोइरालासित पुगनपुग तीन वर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मैले सङ्गत गर्ने अवसर पाएँ । यही समय मैले उहाँका रचनाहरूको गहिरो अध्ययन मात्रै गरिनँ, उहाँको पारिवारिक जीवन, अभाव, दुःख र संघर्षका पाटाहरूसित पनि परिचित भएँ । उहाँले भोग्नुभएको श्रमिकको सामान्य जीवनदेखि झेल्नुभएका राजनीतिक एवं साहित्यिक यात्रा कति चुनौतीपूर्ण र पीडादायी थिए, यही समय मैले थाहा पाएँ । यस्तो थाहा पाएपछि झन् मभित्र उहाँप्रति श्रद्वाको हिँउचुली चुलियो । वास्तवमा, उहाँसितको काव्यिक सङ्गतपछि नै मैले नेपाली गद्य (मुक्त छन्द) का कविताको बृहत्तर आयाम, त्यसको शक्ति वा फैलावटलाई राम्ररी बुझ्ने मौका पाएँ । जसलाई एकथरी परम्परावादी आलोचकहरू पूर्वाग्रहबस् कविताको भाषा बिगारेको, दुरूह र निम्न कोटिको कविता लेख्नेसमेत भन्ने धृष्टता गर्थे । तर उहाँ भने यी सब कुरालाई धाराकुवाको कुरा ठान्दै कवितामा नवीन शैली र सम्भावनाहरूको प्रयोग गरिरहनुहुन्थ्यो ।
वामपन्थी राजनीति र सांस्कृतिक चेतनाको कट्मेरो प्रभाव बोकेर राजधानी छिरेको मेरा लागि गोपालप्रसाद रिमाल र भूपि शेरचन विकल्पहीन कवि थिए । तर एक ऊर्जाशील कविले कसरी, कुन हदसम्म आफ्नो काव्यको भाषालाई चलायमान, विषयको कोलाजमय विविधता र कल्पनाको अकल्पनीय उडान भर्न सक्छ ? सृजनकर्ममा विकल्पहरू यत्रतत्र सर्वत्र हुन्छन् भन्ने तत्त्वज्ञान मैले मोहन कोइरालाबाटै पाएँ । यसरी मेरो लेखनमा पनि उहाँको प्रभाव पर्‍यो । यहीबेला मैले प्रयोगपरक अमूर्त शैलीका, विषय र विम्बहरूको घनत्व भएका केही कविताहरू लेख्ने प्रयास गरेँ । लेखनमा मात्रै होइन, थाहै नपाई उहाँको बोल्ने, हिंड्ने शैलीको समेत ममा प्रभाव पर्‍यो । कतिपय साथीहरूले त मलाई मुखै फोरेर भने, ‘तिमीले बोलेको बुझ्नै छोडियो यार !’ धेरै सोच्ने र लेख्नेहरू थोरै बोल्छन् क्यार, मोहन कोइराला पनि अल्पभाषी हुनुहुन्थ्यो । सायद मलाई उहाँको त्यही गुणको प्रभाव परेको थियो ।
जति बेला उहाँका चर्चित लामा कविताहरू– सूर्यदान, लेक, ऋतु निमन्त्रण र गरलपान, नीलो मह, नदी किनाराका माझी, गंगा प्रवास, एउटा पपलरको पात, सिमसारका राजदूत, त्यस्तै संरचनागत छोटा तर प्रसिद्ध कविताहरू जाँदाजाँदै सम्झेर, देशको परिचय, म सम्झन्छु, कार्टुनको सहर, घाइते युग, आधुनिक नेपालको क्लथ हिस्की, आमालाई बाँच्न दे, म तिम्री छोरीलाई प्रेम गर्छु, चिन्तन, सारङ्गी बोकेको समुद्र, हिमचुली रक्तिम छ, हिमाली चरीको फुल, सारङ्गी, फर्सीको जरा आदिको लती भइसकेको थिएँ । यीमध्ये कति कविताका सुक्तिमय अनुच्छेदहरू म कण्ठस्थ भन्न सक्थेँ ।
आफू बाँचेको युगको विसंगतिपूर्णर् यथार्थलाई नाटकीय शैलीमा लेखिएको ‘घाइते युग’ कविता होस् कि मानवीय अस्तित्वको प्रतीकात्मक ढंगले चित्रण गरिएको कविता (फर्सी . मानिस, जरा . अस्तित्व, फर्सीको जरा . मानवीय अस्तित्व) ‘फर्सीको जरा’ होस् । अथवा आजको पर्यावरणीय चेतनालाई उतिबेलै सम्बोधन गरिएको लामो कविता ‘सिमसारका राजदूत’ होस् कि मान्छे र प्रकृतिविचको अन्तर सम्बन्धलाई एउटा छुट्टै उचाइका साथ व्यक्त गरिएको कविता ‘लेक’ होस् । या, नारी उत्पीडन, प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा) हरूका समस्या, आर्य संस्कृति र ईश्वरीय रहस्यमाथि लेखिएको ‘गंगा प्रवास’ कविता होस् कि मान्छेको जीववैज्ञानिक जन्मकथा र वासनापरक आदिमताको अनौठो चित्रण गरिएको ‘म सम्झन्छु’ कविता होस् । वा, ‘सारङ्गी’ र ‘नदी किनाराका माझी’ जस्ता सीमान्तीकृतहरूका आवाजलाई मुखरित गरिएका कविता हुन्, यी र यस्तै सृजनाहरूले नै आधुनिककालका तमाम कविहरूमध्ये मोहन कोइरालाको व्यक्तित्व विशेष भएको हो, जसलाई आजका कविहरूले नजरअन्दाज गर्‍यौँ भने सायद पुग्ने ठाउँ पहिल्याउन गार्‍हो हुनेछ ।
एकेडेमीमा मेरो खासै कामचाहिँ थिएन । मोहन दाइका सानातिना चिठीपत्रहरू ड्राफ गरिदिनु, ‘कविता’ भन्ने पत्रिकाका लागि नयाँ पुराना कविहरूसित रचना माग्नु र दाइलाई दिनमा एकपल्ट नमस्कार गर्नु, लगभग यति थियो मेरो काम । अहिले सम्झिन्छु उहाँले मलाई जागिर होइन, स्नेह दिनुभएको रहेछ । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको रहेछ । एक जिम्मेवार पिताले पुत्रप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यजस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको रहेछ । म उहाँको आवश्यकताले जागिरे भएको होइनरहेछु । मेरो आवश्यकतालाई पो उहाँको कवि हृदयले बुझेको रहेछ । मेरो जीवनमा यो मीठो घटना त उहाँको महानताले पो भएको रहेछ । जेहोस् झन्डै तीन वर्षको त्यो एकेडेमी बसाइले मेरालागि भातपानी मात्रै जुटाएन, साहित्यिक
सङ्गत र साधनाको आयामलाई पनि फराकिलो पारिदियो ।
‘जब म तिम्री छोरीलाई प्रेम गर्छु
पसिनाको दाग र मुस्कानलाई प्रेम गर्छु
मिहिनेतले रङ्गिएको गालालाई प्रेम गर्छु
म त्यो केटीलाई प्रेम गर्छु–
जो भर्खर डल्याँठाले थाकेकी छ
चपरीले थाकेकी छ
बकाइनोको छायाँमा भर्खर अड्न लागेकी
बैंसको छायामा भर्खर पुग्न लागेकी
म तिम्रो कोपिलालाई प्रेम गर्छु
म त्यो केटीलाई प्रेम गर्छु ।’
(म तिम्री छोरीलाई प्रेम गर्छुबाट)
रहँदैबस्दै जाँदा केही समयको अन्तरालमै हामी हाकिम र कर्मचारी, बाजे पुस्ता र नाति पुस्ता वा अग्रज र अनुजबाट एकाएक साथीजस्ता भयौँ । यस्तो परिस्थितिको निर्माण मैले चाहेर हुने कुरै थिएन । यो सबै उहाँले नै सम्भव तुल्याउनुभएको थियो । यस्तो कसरी भयो त ? वास्तवमा मोहन कोइराला साँच्चिकै महान् कवि हुनुहुन्थ्यो । कविको महानताको प्रकटीकरणका रूपमा पनि म यस घटनालाई लिन्छु । त्यसैले कवि हुनु भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्ने प्रक्रियाभन्दा पनि महान प्रक्रिया ठान्छु म । मोहन दाइ त्यही प्रक्रियाबाट गज्रेपछि पुगिने अनन्त फैलिएको फाँट हुनुहुन्थ्यो, जहाँ मैले गुँडबाट भर्खर निस्केको बचेराझैँ स्वतन्त्रतापूर्वक पखेटा फट्फटाउने अवसर पाएँ ।
यसरी उहाँको मनपेट पाएपछि एक दिन मैले उहाँलाई यस्तो अस्वाभाविक प्रश्न गरेँ, ‘सर ! हजुरको कविता लेखनमा त टीएस इलियटको प्रभाव परेको छ भन्छन् नि ?’ मेरो यस्तो अप्रत्याशित प्रश्नमा पनि उहाँले कुनै प्रतिरोध नगरी फिस्स हाँस्दै जवाफ दिनुभो, ‘हुन सक्छ, होला ।’
म अवाक भएँ । केही छिनको मौनतापछि चियाको सुरुप लिँदै उहाँले सोध्नुभो, ‘मुकारुङ ! अरु के–के भन्छन् त मलाई ?’
मैले अप्ठ्यारो मान्दै फेरि भनें, ‘सरको कविता दुरूह भो रे, बुझिँदैन रे । जे पायो त्यही लेख्छ भन्छन् ।’
फेरि मुसुक्क मुस्कुराउँदै उहाँले भन्नुभो, ‘होला, हुन सक्छ । मलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै लाग्छ ।’
म झन् अप्ठ्यारोमा परेँ । आफ्नै प्रश्नले अचानक बन्द कोठामा थुनिएको बिरालोभन्दा त्रसित मैले बाहिर निस्कन चोरबाटो खोजेँ, ‘तर सर ! वामपन्थी, प्रगतिशील भन्नेहरूले हजुरलाई यसो भन्छन् ।’ कविजी मलाई हेर्दै फेरि मुस्कुराउनुभो र उठ्दै उहाँले भन्नुभो, ‘भन्नेहरू के–के भन्छन् भन्छन्, लेखिरह्यौ भने तिमीलाई पनि पछि यसै भन्लान् । भन्नेहरूको पछि नलाग्नू ! लेख्न नछोड्नू, लेखिरहनू ! है ?’
त्यसपछि मोहन दाइ कतै कार्यक्रममा जान अफिसबाट बाहिर निस्किनुभो । बल्ल म पनि आफैंले सृजना गरेको भयबाट निस्किएँ । उहाँजस्तो कविलाई यतिसम्म सोध्ने मेरो हैसियत त थिएन तर सोधेँ । कहिलेकाहीँ आफ्ना कुरूप र मूर्खतापूर्ण प्रश्नहरूको पनि सुन्दर र सारपूर्ण उत्तरहरू प्राप्त हुन्छन् । जसले जीवनलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले विद्वान्हरूले प्रश्न गर्न नछोड्नू भनेका होलान् । बुद्धलाई पनि तिनका शिष्यहरूले सोधेका सबै प्रश्नहरू कहाँ प्रश्न थिए होलान् र ?
भन्नेहरूले त रिमाललाई वाल्ट हिटम्यान, देवकोटालाई वर्डस्वर्थ, शेली, किट्स समलाई शेक्सपियर बीपीलाई चेखव, टोल्स्टोय, फ्राइड, मोपासाँका रचनाहरूको सक्कलबमोजिम नक्कल गर्ने पनि भन्छन् । के गर्नु भन्नेहरूको मुख थुन्न सकिन्न । तर साहित्यको सृजना त प्रभावबाटै प्रारम्भ हुने र आफ्नोपनको निर्माणपछि पूर्ण हुने विषय हो । यद्यपि मोहन कोइराला र टीएस इलियटमा भने केही समानताहरू थिएछन् । जस्तो कि यी दुवै लोकतन्त्र र मानवताका पक्षमा उभिँदै विश्व र समाजका विसंगतिहरूको घनीभूत चित्रण गर्ने विश्वसनीय आधुनिक प्रयोगवादी कविहरू थिए । त्यस्तै टीएस इलियटलाई अमेरिकी युरोपियन समाज र विश्वयुद्धको कुरूपताहरूले काव्यको भाषा दिएको थियो भने मोहन कोइरालालाई लोकतन्त्रको भोक, सामन्ती राजतन्त्र, निरंकुश राणाशासन र तिनका अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडनहरूले । संयोग नै मान्नुपर्छ अरू अनेकौं गहन कविताहरू हुदाँहुँदै पनि टीएस इलियटलाई चिनाउने कविता ‘वेस्ट ल्यान्ड’ बन्यो भने मोहन कोइरालालाई चिनाउने कविता ‘फर्सीको जरा’ भयो । यी दुवै कविताले मानिसका निराशा, कुण्ठा र विरोधाभासहरूबीच मानवीय अस्तित्वको वकालत गर्छन् ।
‘लाटीले घुमाएको जाँतोमा पालो छोडेर वर्तमान दौडेको छ
कानो गोरुको हरियो चौरमा निम्त्याएर वर्तमान फर्केको छ
चट्टानले मिचेको अँगेनोमा रोटी पोलेर वर्तमान लम्केको छ
छकिनबाट घटाउ गर अनन्त घट्टको तावा मात्र हो
काट, भोज गर बितेको भुङ्ग्रे रोटी मसाने टेबिलमा
किनकि अनन्तले हामीलाई छली चीलझैं झम्टा मार्छ ।’
तात्क्षणिक अनुभूति र अवचेतन मनका भावहरूलाई चेतन प्रवाह (अन्कन्सियस्नेस्) शैलीमा प्रतीकात्मक ढंगले व्यक्त गर्ने विसंगतिवोध र अस्तित्ववादी चिन्तन धाराका कवि मोहन कोइराला कतिपय सन्दर्भमा उहाँका आफ्ना कविताहरूजस्तै जटिल र दुरूह लाग्थे । कहिलेकाहीँ त म उहाँको कुरै बुझ्दिनथेँ । नबुझेको त्यो कुरा बुझ्न फेरि सोध्दा उहाँ अर्कै कुरामा प्रवेश गरिसक्नुभएको हुन्थ्यो । उहाँको यस्तो स्वभाव यौटा इमानदार सहयोगीका लागि निकै अप्ठ्यारो विषय हो । त्यसैले काम गर्दा कतिपय सन्दर्भमा त म उहाँसित कायलै हुन्थेँ ।
उहाँसित अर्को यस्तो अनुभव पनि मेरो छ— एकेडेमीभित्र बाहिर पुगनपुग दुई दशक सङ्गत गरेँ हुँला । तर प्रत्येक भेटमा उहाँले मलाई सोध्ने एउटै प्रश्न हुन्थ्यो, ‘के छ मुकारुङ सोलुखुम्बुतिर ? ठीक छ ?’ यो प्रश्नको उही उत्तर दिँदा–दिँदा सधैँ हैरान हुन्थेँ म । सायद उहाँले मलाई मेरो उत्तरभन्दा गहिरो गरी सोलुको शेर्पा सम्झिनुहुन्थ्यो । तर फेरि यस्तै भ्रमबीच मप्रति उहाँको माया र स्नेह भने कस्तो... ? त्यो त अवर्णनीय नै थियो । एकपल्ट उहाँकै काव्य विभागअन्तर्गत एकेडेमी र एक साहित्यिक संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्न हामी चितवन गर्‍यौं । गैंडाकोटमा भव्य कार्यक्रम भयो । साँझ त्यहाँका तत्कालीन सांसद सूर्यभक्त अधिकारीले कवि, लेखकहरूलाई क्याम्फायरसहितको पार्टी दिने भए । तर ऊक्त कार्यत्रम सुरु हुनुअघि नै मित्र, कवि खुमनारायण पौडेलले हामी केही साथीहरूलाई चितवनको तास खुवाउन बजार लगे । फर्किदा कार्यक्रम निकै अघि बढिसकेको रहेछ । तर मोहन दाइ भने त्यतिबेलासम्म पनि हातमा पोलेको खसीको मासुको एउटा ठूलै टुक्रा बोकेर मलाई धुइँधुइँती खोजिरहनुभएको रहेछ । उहाँको पछि लागेर अरू केही कविहरू पनि हामीलाई खोजिरहेका रहेछन् । अहिलेजस्तो त्यतिबेला मोबाइल थिएन । यदि मोबाइल भएको भए पक्कै फोन गर्नुहुन्थ्यो होला ।
हामी पुग्नासाथ रिसाएर, कहाँ बेपत्ता भएको भन्दै मोहन दाइले उक्त पोलेको मासु मेरो हातमा थमाइदिनुभयो । कुनै आमाले आफ्नो अबोध बच्चालाई वा कुनै केटाकेटीले आफ्नी आमालाई गर्नेजस्तो स्नेह मोहन दाइले मलाई गर्नुभएको देखेर खुमनारायणजी र अरू साथीहरू हेरेका हेरै भए । सायद कवि हृदयको स्नेहको अभिव्यक्तिको शैली नै यस्तो हुनेहोला । मासु त सेलाएर चिसो भैसकेको थियो, तर उहाँको स्नेहको यो प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिले भने म निथ्रुक्क भिजेँ । दाइले सोलुको शेर्पा भोजपुरको राई जे सम्झे पनि आखिर मलाई खोज्नुभो, एउटा मानिसलाई खोज्नुभो । मानिसलाई अनन्तसम्म खोजिरहने प्रक्रिया नै कविता हो । सायद ममाथि यसरी स्नेह खन्याएर दाइले फेरि एउटा नयाँ कविता खोज्नुभएको थियो ।
यही समय मोहन दाइले सम्माल्नुभएको काब्य विभागबाट ‘आजका नेपाली कविता’ नामक गन्थ्र प्रकाशित भयो । ग्रन्थमा क–कसका कविता परे, क–कसका परेनन् तर उक्त ग्रन्थको वामपन्थी खेमाका कविहरूबाट चर्को विरोध भयो । यतिसम्म कि विरोध गर्नेहरूले मोहन दाइलाई कालो मोसो दल्ने र एकेडेमीकै परिसरमा कृति जलाउनेसम्मको धम्की दिइएको हल्ला साहित्यिक बजारमा फैलियो । भोलिपल्ट दिउँसो एकेडेमीको परिसरमा एक हूल कवि, लेखकहरू जम्मा भएको मैले देखेँ । सायद उहाँहरू मोहन कोइराला कार्यकक्षबाट बाहिर निस्केलान् र मोसो दलौंला भन्ने योजनामा हुनुहुँदो हो वा साङ्केतिक विरोध मात्रै त्यो थियो तर त्यस दिन सुइँको पाएरै हो कि मोहन दाइ भने अघि नै घर गइसक्नुभएको थियो । ढोकामा अचानक मलाई देखेर हूलबाट कसैले भन्यो, ‘खोदा पहाड निकला चुहा !’ हूलले एक फेर ठूलो हाँसो हाँस्यो । परैबाट हेरेको हुनाले मैले कसैलाई पनि प्रस्ट चिनिनँ । आदरणीय कविहरू विमल निभा, श्यामल, पुरुषोत्तम सुवेदी, नारायण ढकाल, गोविन्द गिरि ‘प्रेरणा’ हरू हुन् कि जस्तो धमिलो विम्ब मात्रै सम्झना हुन्छ । त्यसपछि मोहन दाइको व्यंग्यमिश्रित भनाइ आयो, ‘एकेडेमीमा काम गरे विवादमा परिन्छ, त्यसैले केही नगरी बस्नु राम्रो ।’ तर दाइले आफ्नो काम गर्न भने कहिल्यै छोड्नुभएन ।
मोहन कोइराला लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहने कवि भए पनि इतर विचार वा आस्था राख्ने स्रष्टाहरूप्रति कहिल्यै पूर्वाग्रह राख्नुहुन्नथ्यो । बरु उल्टै उच्च सम्मान, अगाध स्नेह गर्नुहुन्थ्यो । तर उहाँलाई कांग्रेसी कवि, गुटगत हिंड्ने कवि भनेर पनि आक्षेप लगाइन्थ्यो । पाँच वर्षको उहाँको कार्यकाल सकिएपछि मोहन दाइसितै मैले पनि एकेडेमी छोड्नुपर्‍यो । केही समयपछि फेरि बैरागी काइँलाले बोलाउनुभो, केही समय काँल्दाइको विभागमा अल्झिएँ, अडिन सकिनँ बाहिरिएँ । मोहन कोइराला कवि भएकै कारणले तीन पटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुग्नुभयो । विसं २०३५ र २०४६ मा परिषद् सदस्य र २०५६ मा उपकुलपति हुनुभयो । एउटा कविका लागि यो भव्य शासकीय यात्रा हो । त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूमा उहाँका कविताहरू विशेष रूपले पढाइए, अहिले पनि पढाइन्छन् । तर साहित्यका आम पाठकबीच वा नेपाली समाजको चेतनाको कुन तहसम्म उहाँका रचनाहरू सम्प्रेषित भए ? कि बौद्धिक समुदायको एउटा सीमाभित्र मात्रै यो रह्यो ? मलाई लाग्छ— उहाँको काब्यको ध्वनि र शिल्पकारितालाई बुझ्न सायद हाम्रो समाज अझै तयार भइसकेको छैन । तर कवि रिमालले भनेझैँ त्यो दिन अवश्य आउने छ । र, हाम्रा नेताहरूले सस्तो उखानटुक्का होइन, मोहन कोइरालाको काब्यमा व्यञ्जित सुक्तिमय पदहरू सुनाउँदै हामीसित भोट माग्नेछन् ।
विसं २०६२ साउन ८ गते बानेश्वरस्थित आरोहण गुरुकुल थियटरमा मेरो एकल कविता वाचन कार्यक्रम आयोजना हुने भयो । निम्ता भन्न म उहाँको मैतिदेवीस्थित निवासमा पुगेँ । केही थाकेजस्तो आफ्नो अनुहारमा मुस्कानले चमक थप्दै मोहन दाइले भन्नुभो, ‘कविता त खतरा लेख्यो नि मुकारुङले, होइन ?’
यो मेरो कविता ‘बिसे नगर्चीको बयान’ माथिको उहाँको फ्रतिक्रिया थियो । यही कविताको कारण नै मेरो एकल कवितावाचन कार्यत्रम हुँदै थियो । ‘नदी किनाराका माझी’ जस्तो शक्तिशाली कविता लेखेर उत्पीडित, सीमान्तीकृत (सबाल्टर्न) हरूको आवाजलाई उहिल्यै उचालेका कविले फेरि मलाई स्नेह व्यक्त गर्नुभएको म बुझ्ने भइसकेको थिएँ । त्यसैले केही जवाफ नदिई उहाँलाई कार्यक्रममा आइदिन निम्ता गरेँ । भोलिपल्ट कार्यक्रममा आधुनिक नेपाली कविताका दुई महान् प्रतिभा मोहन कोइराला र बैरागी काइँलाले सँगै दीप प्रज्वलन गरिदिनुभो । त्यही दीपको उज्यालोमा मैले आफ्नो कविता सुनाएँ ।
‘कति हिडेँ हुँला
म यो जीवनमा
कति हिँडेँ हुँला
मैले छोडेर आएकाहरूलाई भन्नुथियो–
मलाई लिएर आउनू !
मलाई छोडेर जानेहरूलाई भन्नुथियो–
पुगेर मलाई भेट्नू !
कति हिडें हुँला
कति हिँडें हुँला
भारी बोकेर कविताको ।”
(कविता ः मोहन कोइराला, बिसे नगर्चीको बयानबाट)
कार्यक्रम सकेर बाहिर निस्कँदा मोहन दाइलाई देखिनँ । यताउता खोजिहेरेँ । उहाँ त अघि नै घर गइसक्नुभएछ । मलाई थाहा थियो, बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ । मेरो अनुरोध टार्न नसकेर मात्रै आउनुभएको थियो । वास्तवमा म त्यस दिन उहाँको प्रतिक्रिया चाहन्थेँ, ढाडस चाहन्थेँ । किनभने त्यो मेरो जीवनकै अर्को महत्त्वपूर्ण घटना थियो । यसरी उहाँलाई नदेख्दा मलाई खै के नपुगेजस्तो भइरह्यो । त्यसपछि त म देशभित्र देशबाहिरका विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुन थालेँ । भेट्ने मन हुँदाहुँदै पनि भेट्ने साइत जुरेको थिएन । कि, भेट्नु नै यति थियो कि ?
अचानक विसं २०६३ फागुन १० गतेको दिन मैले उहाँको चोला उठेको अप्रिय खबर सुन्नुपर्‍यो । हाम्रो अन्तिम भेटको निसानी त्यही कार्यक्रममा बलेको दीपछेउ चम्किरहेको उहाँको स्निग्ध अनुहार भयो । म भावविह्वल भएँ । मेरो आँसु रोकिएन । मुत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि म किन यति धेरै स्तब्ध भएँ ? किनभने जीवनको त्यस्तो मोडमा मैले उहाँको साथ पाएको थिएँ, जुन मोडमा उभिएर हेर्दा अघिल्तिर हिँड्नलाई सयौं बाटोहरू स्वागतमा हुन्छन् । तर कुन बाटो हिंड्दा जीवनले आफैँलाई धन्यवाद दिन्छ ? खुट्याउन सकिन्न । यहीबेला मलाई यो बाटो देखाउनुभयो, जुन बाटोले आज मलाई यतिसम्म ल्याइपुर्‍याएको छ । मोहन दाइ ! अहिले फेरि म, हाम्रो हरभेटमा दोहोरिने तपार्इंको त्यो प्रश्न– ‘के छ मुकारुङ सोलुखुम्बुतिर ? ठीक छ ?’ सुन्न चाहन्थेँ र सधैंझैँ त्यसरी नै म उही उत्तर दिन चाहन्थेँ । तर मलाई थाहा छ, मेरो उत्तर पनि तपाईंको त्यो प्रश्नसँगै यो ब्रह्माण्डमा गुन्जिरहने तर सजिलै सुन्न नसकिने आवाज भइसकेको छ । जसरी हरकोहीलाई तपार्इंका कविताहरूको आवाज सजिलै सुन्न कठिन छ ।
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०९:४९